Ibanga And abahleli, Agricultural Products Job Inkcazelo / Asayinimenti Duty Sample - JobDescriptionSample.org
ekhaya / Akohlulwanga / Ibanga And abahleli, Agricultural Products Job Inkcazelo / Asayinimenti Duty Sample
Jacob Isilimela 28, 2016 Akohlulwanga 1 Comment 952 Views
Baristas Job Description / Imisebenzi noxanduva Template
Grade, uhlobo, okanye uhambise izidlo ukuba wonke kunye nezinye iimpahla basefama solinganiso, neekhilogram, umthunzi, okanye ukugula.
Rank kunye uhlobo iimveliso ngokwendlela izinto ezifana umzekelo umbala, iintlobo, ubude, ngokubanzi, khangela, ingqondo, iphunga, nomgangatho ukuze uqinisekise sokusingathwa ngokufanelekileyo nokusetyenziswa.
Aphosa iimveliso kakuhle okanye phantsi okanye into engaqhelekanga, kunye nempahla isikhundla zamkelekile imigqomo ulawulo leyo ngaphezu.
Ubunzima izinto okanye apreyizali neekhilogram zabo, njengobuhle okanye bavakalelwa.
Beka impahla kwizikhongozelo ngokungqinelana kwinqanaba kunye nenqanaba nakumahlelo iimbiza.
Xela id okanye ibakala ubuninzi kwi amatikiti okanye ukuthunyelwa, umangele, okanye zokulala yokuthengisa.
besusa ifayibha Independent phakathi kweminwe ukuqinisekisa umgangatho oluhlangeneyo zezibonelelo kunye namandla.
Iintshukumo Task Need
Ukufunda izivakalisi Ulwazi-Knowledge nezivakalisi kuphekelwe iifayile ezinxulumene nomsebenzi.
Active Ukuphulaphula-Ukunikezela ingqalelo ngokupheleleyo oko abanye bathi, esebenzisa ixesha ukuba siqonde izinto eyenziwayo, imibuzo ezibuza ngendlela efanelekileyo, kwaye zange bhe afika ukuba akafanelekanga.
Ukuvelisa-bexoxa ngendlela eyiyo yabhalwa phantsi ezazibonisa neemfuno yabaphulaphuli.
Mathematics-Isebenzisa maths ukuba ukulungisa iingxaki.
Uphando-Ukusebenzisa imigaqo zonyango kunye neendlela ukuba ukulungisa iingxaki.
Criticalthinking-Ukusetyenziswa okusesikweni kunye nesizathu ubone izakhono kunye neziphene kweziphumo, izisombululo enye okanye iindlela kwimiba.
Active Learning-Ukuqonda imiphumo info oko afreshi elizayo nganye kunye problemsolving okhoyo nokuthathwa kwesigqibo.
Learning Strategies-nokusetyenziswa nokukhetha ubuchule kunye nobuchule elifanelekileyo imeko coachingANDinstructional xa sele uyincutshe ekudlaleni okanye ukufundisa iingongoma ezintsha.
Ukulandelela-MonitoringORAssessing ukusebenza ngokwakho, abantu ukuba ezinye, okanye iinkampani ukwenza utshintsho okanye cinga amanyathelo okulungisa.
Social Perceptiveness-Ukuba abazi othersA utyekelo yaye esazi ukuba kutheni kusabela ngenxa yokuba benze.
izenzo Control-buyatshintsha ngokunxulumene nemisebenzi othersI.
Ukweyisela-ekukholiseni abanye ukuba utshintshe iintloko okanye izenzo zabo.
Iingxoxo-Ukuhambisa abanye kunye nokuzama axolelanise mahluko.
Uqeqesho-Ukuyalela abanye HOWTO athathe amanyathelo.
Orientation-Ngokuqinisekileyo Service ekufuneni iindlela ukuncedisa abantu.
Advanced Problemsolving-umahluko phambili iingxaki kunye nokuphengulula ulwazi efanelekileyo ingqalelo nokuvelisa ukukhetha ukusebenzisa ulungiso.
Imisebenzi Evaluation-Ukuqwalasela ngumba ezithengiswayo kwaye enqwenela ukwenza uyilo.
Technology Design-Engineering ukuba banikele umsebenzisi kunye nokwenziwa okanye ukutshintsha iimfuno izixhobo.
Izixhobo Ukukhethwa-Ukuchonga izixhobo kunye uhlobo izixhobo kwafuneka kakhulu ukwenza umsebenzi.
izixhobo yoFakelo-Ukongeza, imishini, ezintambo, okanye iinkqubo ukuze anelise iimfuno.
Development-kokuqamba izicelo computer kwimisebenzi ukuba ezahlukeneyo.
Operation Tracking-Watching iminxeba, into yokulinganisa, okanye Imiqondiso ezongezelelweyo ukuze siqiniseke kukho izixhobo ezisebenza ngokuchanekileyo.
Inkqubo and Control-Ukusingatha iinkqubo ze izixhobo okanye iindlela.
Ulondolozo-Ukuzifezekisa ukunakekela izixhobo nokuchonga nini kwaye yintoni uhlobo zokukhwelisa kuya kuba yimfuneko.
Zokusombulula-Ukucacisa izizathu ezisebenza iimpazamo isigqibo ukuba uqhubeke njani na ngayo.
Ukubuyisela-Ukulungisa iinkqubo okanye izixhobo kusetyenziswa izixhobo ukuba kubalulekile.
Quality-Control Examination-Ukwenza uphando kunye neemvavanyo iimveliso, abanikezeli, okanye imisebenzi ukuze ukuvavanya ukusebenza okanye umgangatho.
View kunye nezibonelelo Decisionmaking-Ukuqwalasela kunye iindleko ngokubanzi zemisebenzi kunokwenzeka ukuba ukhethe lowo afanelekile kakhulu.
Systems Analysis-Ukumisela uhlengahlengiso endleleni emoyeni, amashishini, kananjalo iimeko apho kuya kuba nefuthe iinzuzo na, oluhlobo luni na indlela kufuneka asebenze.
Iindlela amanyathelo okanye ezibonisa ukusebenza kwenkqubo Evaluation-zokwahlula kwakunye ezichanekileyo okanye amanyathelo afunekayo ukuze ukuphucula ukusebenza, ngokungqinelana neenjongo device.
Ixesha-Management-Ukuphatha kumsitho zabanye kunye xesha oneis siqu.
Imisebenzi of Financial Resources-isigqibo ngayo ingeniso iza kusetyenziselwa ukufumana umsebenzi ugqityiwe, kunye ukugcinwa malunga nezi ndleko.
Kweliso Materials Resources-Viewing ezamkelela kusetyenziswe ezifanelekileyo eendawo, izixhobo, kunye zokwakha imfuneko ukwenza umsebenzi othile.
Kweliso Personnel Resources-Ukudala ekhuthazayo, nokukhokela abantu ngenxa yokuba zisebenza, ukubona abantu abaninzi olusebenzayo loo msebenzi.
Ngaphantsi-ngaphandle Diploma School Top
IDiploma High School Senior (okanye kuGedaliya okanye Senior School ukulingana Qualification)
Iiklasi ezininzi Faculty
Umsebenzi Control Skills Need
nenamandla – 81.08%
Okutshiwo – 84.59%
Ingxaki Abanye – 82.64%
Ulungelelaniso Social – 84.27%
Ukuzibamba – 84.64%
Gxila Iinkcukacha – 87.92%
ingqibelelo – 89.27%
Thinking kohlaziyo – 86.09%
Telephone Operators Job Description / Jobs And Duty Sample